Vashandi vehurumende vari kuvimbisa kushanda mazuva maviri chete pasvondo vachiti havana mari dzekufambisa.
Vabereki nevadzidzisi vokurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yemihoro yevashandi vehurumende kusanganisira varairidzi vachiti izvi zvikasaitwa zvinokanganisa zvakanyanya dzidzo yevana.
Izvi zvinouya panguva iyo rimwe sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende, reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions (ZCPSTU), iro raimbozivikanwa se Apex Council, rakazivisa neChishanu kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri chete pasvondo kutanga neMuvhuro unouya.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri, VaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti mari dzavari kupiwa dzekufambisa dzinongokwana mazuva maviri chete.
Nhaurirano pakati pesangano iri nehurumende nemusi weChina hadzina zvadzakabudisa.
Mutevedzeri wemunyori wesangano iri, VaGibson Mushangu, vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari irikupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete, Muvhuro neChipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare vati kana varairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma zvinosiya vana vavo vari munataisireva. Amai Gavi vati nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa zvikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya sezvo vakange vasiri kuita zvidzidzo zvepadandemutande.
Mumwe mubereki, VaBanny Manokore, vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committes, vaudza Studio 7 kuti vanoshungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndihwo hunokuvara.
VaManokere vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. VaManokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzika midzi.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAlmagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018.
VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Doctor Takavafira Zhou, vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa vachitiwo kunyangwe pamazuva anenge achiendwa kubasa, varairidzi havanodzidzisi nemoyo yese sezvo vanenge vachinetsekana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi, VaTaungana Ndoro, vaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri, Muzvinafundo Paul Mavima.